နမေကောငျးခငျြဘူးဆိုပွီး ခဈြသူကိုခြှဲမိလို့ မာစီးဒီးကားကွီးရသှားတဲ့ ကောငျမလေး - MM Gallery Online
ခငျဗြားတို့သာ ကိုယျ့ဇနီးက “နလေို့ထိုငျလို့မကောငျးခငျြဘူး” လို့ ငွီးခဲ့မယျဆိုရငျ ဘာလုပျမှာလဲ။ ဒီအမြိုးသားကတော့ ဇနီးသညျနမေကောငျးဘူးလို့ ငွီးလိုကျတာနဲ့ အံ့သွသှားစမေယျ့လကျဆောငျကွီးတဈခုကို ပေးခဲ့ပါတယျတဲ့လေ။
ဒီအကွောငျးကို ဇနီးသညျကိုယျတိုငျ သူမရဲ့ Twitter မှာ သွဂုတျလ ၂၃ ရကျနတေု့နျးက တငျလာခဲ့တာပါ။ သူမနာမညျကတော့ Jennifer ဖွဈပါတယျ။
အဲဒီနကေ့ တငျခဲ့တဲ့ post မှာတော့ Jennifer ဟာ သူမရဲ့ ခငျပှနျးနဲ့အတူတူ ကားသဈကွီးတဈစီးရှမှေ့ာ ရိုကျထားတဲ့ဓာတျပုံလေးကို တှဲတငျထားခဲ့ပါတယျ။ နောကျ caption ကတော့ “I wasn’t feelin well and my husband went out and got meaBenz. YALL” ဆိုပွီး ရေးထားပါတယျ။ Jennifer ဟာ ခငျပှနျးသညျနဲ့ရတဲ့ ကိုယျဝနျကွီးလှယျထားရပါတယျ။ ကိုယျဝနျသညျတို့ရဲ့ ထုံးစံအတိုငျး ကိုယျလကျမအီမသာဖွဈပွီး နထေိုငျလို့မကောငျးတဲ့ ဝဒေနာကို Jennifer တဈယောကျ ခံစားနရေပုံပါပဲ။
ဒီအကွောငျး ခငျပှနျးသညျကို ငွီးပွမိတဲ့အခါမှာတော့ ခငျပှနျးသညျဟာ မပွောမဆိုနဲ့ မဆီမဆိုငျ ဇနီးသညျကို surprise လုပျခဲ့ပါတယျ။ အဲဒါကတော့ မာစီးဒီကားသဈကွီးတဈစီးနဲ့ ဇနီးသညျကို surprise လုပျခဲ့တာပါတဲ့။ ပုံမှနျဆိုရငျတော့ ဒီလိုငွီးလာတဲ့ ဇနီးသညျကို ဆေးတိုကျတာတို့၊ နှေးနှေးထှေးထှေးဂရုစိုကျပေးတာမြိုးပဲ လုပျတတျကွပမေယျ့ Jennifer ရဲ့ ခငျပှနျးကတော့ ကားကွီးဝယျပေးခဲ့တာဆိုတော့ ဆနျးဆနျးပွားပွားလေးဖွဈနတောပေါ့နျော။ ဒါပမေဲ့ သူ့စိတျကူးလေးကတော့ ကိုယျဝနျဆငျေကာလမှာ ခကျခဲပငျပမျးနတေဲ့ ဇနီးသညျဟာ ဒီထကျမက ထိုကျတနျတဲ့လကျဆောငျနဲ့တောငျ ထိုကျတနျပါတယျတဲ့လေ။
ဒီ post ကိုမွငျတဲ့လူတှကေတော့ Jennifer တို့စုံတှဲကို အမွငျနှဈမြိုးစီ ကှဲလှဲလကျြရှိနပေါတယျ။ တဈခုကတော့ အတျောကံကောငျးတဲ့ အမြိုးသမီးပဲဆိုပွီး ခငျပှနျးသညျရဲ့ဂရုတစိုကျခဈြခွငျးမတ်ေတာတှကေို ခြီးကြူးနတောပါ။ နောကျတဈမြိုးကတော့ သိတဲ့အတိုငျး ဘုဘောကျထိုငျပွောနကွေတာပါပဲ။ နမေကောငျးဘူးပွောတာနဲ့တငျ ဘာဆိုငျလို့ကားကွီးဝယျပေးရတာလဲ၊ ပိုကျဆံက အရာရာပါပဲဆိုပွီးတော့ ဝဖေနျနခေဲ့ကွတာပါ။
how yall hating bcaman bought his loveracar? yall just miserable and never thought of huh? CONGRATS SIS THATS LOVE 😍
— ElevatedHoney 💎 (@SyTheeBest) August 23, 2020
နေမကောင်းချင်ဘူးဆိုပြီး ချစ်သူကိုချွဲမိလို့ မာစီးဒီးကားကြီးရသွားတဲ့ ကောင်မလေး
ခင်ဗျားတို့သာ ကိုယ့်ဇနီးက “နေလို့ထိုင်လို့မကောင်းချင်ဘူး” လို့ ငြီးခဲ့မယ်ဆိုရင် ဘာလုပ်မှာလဲ။ ဒီအမျိုးသားကတော့ ဇနီးသည်နေမကောင်းဘူးလို့ ငြီးလိုက်တာနဲ့ အံ့သြသွားစေမယ့်လက်ဆောင်ကြီးတစ်ခုကို ပေးခဲ့ပါတယ်တဲ့လေ။
ဒီအကြောင်းကို ဇနီးသည်ကိုယ်တိုင် သူမရဲ့ Twitter မှာ သြဂုတ်လ ၂၃ ရက်နေ့တုန်းက တင်လာခဲ့တာပါ။ သူမနာမည်ကတော့ Jennifer ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီနေ့က တင်ခဲ့တဲ့ post မှာတော့ Jennifer ဟာ သူမရဲ့ ခင်ပွန်းနဲ့အတူတူ ကားသစ်ကြီးတစ်စီးရှေ့မှာ ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးကို တွဲတင်ထားခဲ့ပါတယ်။ နောက် caption ကတော့ “I wasn’t feelin well and my husband went out and got meaBenz. YALL” ဆိုပြီး ရေးထားပါတယ်။ Jennifer ဟာ ခင်ပွန်းသည်နဲ့ရတဲ့ ကိုယ်ဝန်ကြီးလွယ်ထားရပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်သည်တို့ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ကိုယ်လက်မအီမသာဖြစ်ပြီး နေထိုင်လို့မကောင်းတဲ့ ဝေဒနာကို Jennifer တစ်ယောက် ခံစားနေရပုံပါပဲ။
ဒီအကြောင်း ခင်ပွန်းသည်ကို ငြီးပြမိတဲ့အခါမှာတော့ ခင်ပွန်းသည်ဟာ မပြောမဆိုနဲ့ မဆီမဆိုင် ဇနီးသည်ကို surprise လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ မာစီးဒီကားသစ်ကြီးတစ်စီးနဲ့ ဇနီးသည်ကို surprise လုပ်ခဲ့တာပါတဲ့။ ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ ဒီလိုငြီးလာတဲ့ ဇနီးသည်ကို ဆေးတိုက်တာတို့၊ နွေးနွေးထွေးထွေးဂရုစိုက်ပေးတာမျိုးပဲ လုပ်တတ်ကြပေမယ့် Jennifer ရဲ့ ခင်ပွန်းကတော့ ကားကြီးဝယ်ပေးခဲ့တာဆိုတော့ ဆန်းဆန်းပြားပြားလေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်။ ဒါပေမဲ့ သူ့စိတ်ကူးလေးကတော့ ကိုယ်ဝန်ဆေင်ကာလမှာ ခက်ခဲပင်ပမ်းနေတဲ့ ဇနီးသည်ဟာ ဒီထက်မက ထိုက်တန်တဲ့လက်ဆောင်နဲ့တောင် ထိုက်တန်ပါတယ်တဲ့လေ။
ဒီ post ကိုမြင်တဲ့လူတွေကတော့ Jennifer တို့စုံတွဲကို အမြင်နှစ်မျိုးစီ ကွဲလွဲလျက်ရှိနေပါတယ်။ တစ်ခုကတော့ အတော်ကံကောင်းတဲ့ အမျိုးသမီးပဲဆိုပြီး ခင်ပွန်းသည်ရဲ့ဂရုတစိုက်ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကို ချီးကျူးနေတာပါ။ နောက်တစ်မျိုးကတော့ သိတဲ့အတိုင်း ဘုဘောက်ထိုင်ပြောနေကြတာပါပဲ။ နေမကောင်းဘူးပြောတာနဲ့တင် ဘာဆိုင်လို့ကားကြီးဝယ်ပေးရတာလဲ၊ ပိုက်ဆံက အရာရာပါပဲဆိုပြီးတော့ ဝေဖန်နေခဲ့ကြတာပါ။